Dowlada Jabuuti oo cabasho kasoo saartay ciidamo ay Eriterea soo dhoobta xadkeeda | TOP NEWS
Dowlada Jabuuti oo cabasho kasoo saartay ciidamo ay Eriterea soo dhoobta xadkeeda
Wasiirka arrimaha dibadda dalka Jabuuti ayaa ku eedeeyay Eritrea inay degeen dhulka lagu muransan yahay ee soohdintooda wax yar ka dib markii ciidamada nabad ilaalinta Qatar ay ka baxeen goobta todobaadkan.
Mahamoud Ali Youssouf ayaa sheegay in ciidamada militiriga Jabuuti ay”heegan ku jiraan” islamarkaana cabashooyin u gudbiyeen Qaramada Midoobay iyo Midowga Afrika.
“Nabad ilaalinta Qatar ayaa ka baxeen bisha June 12 iyo 13.keedii sanadkan Isla maalintaas, waxaa jiray dhaq-dhaqaaq militari ee ciidamada Eritrea ee buurta Dumeira,” ayuu Mahamoud Ali Youssouf u sheegay wakaalada wararka ee Reuters.
“Haatan waxa ay si buuxda gacanta ugu dhigeen buurta Dumeira iyo jasiirada Dumeira. Tani waa xadgudub ka mid ah qaraarka Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay,” ayuu hadalkiisa ku daray, Isagoo tilmaamaya meelaha dalalka deriska ku muransnyihiin.
Maamulka Eritrea wali jawaab ka bixinin eedeemaha dawlada jabuuti.
Qatar ayaa ku dhawaaqay in ay ciidmadooda kala baxayan aagaasi bisha June 14, maalmo ka dib markii labada dal ee bariga Afrika la safteen Saudi Arabia iyo xulafadeeda ee khilaafka diblomaasiyadeed ee Doha.
Dowlada Jabuuti oo cabasho kasoo saartay ciidamo ay Eriterea soo dhoobta xadkeeda added by Tifaftiraha Somalida Maanta on June 18, 2017